निजी विद्यालयमा नेपाली भाषाप्रति यत्रो वितृष्णा किन ?
- प्रशान्त भण्डारी
अधिकांश बाल्यकाल र किशोरावस्था काठमाडौं र पोखरामा बिताएको मैले स्कुले जीवन पनि यिनै सहरका निजी विद्यालयहरूमा बिताएँ । महँगा पुस्तक, गह्रौँ झोला, बारअनुसारको पाेशाक आदि निजी विद्यालयका विशेषतामध्ये छुटाउनै नहुने विशेषता हो अंग्रेजी माध्यममा पढाइ । अझ रोचक विशेषता त के भने विद्यालयभित्रको वार्तालापको भाषा अंग्रेजी अर्थात् विद्यार्थीलाई अंग्रेजीमा निपूण बनाउने गुरुमन्त्र ।
सबैले अवलम्बन गरेको यो गुरुमन्त्रबाट मैले पढेका पाठशालाहरू पक्कै अछुत थिएनन् । यस्तो नियम र यसले जन्माउने पठनपाठनको वातावरणका फाइदाहरू आफ्नै होलान् । त्यस विषयको उत्खनन गर्ने विज्ञता म राख्दिनँ । यस लेखको उद्देश्य भनेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूति उतार्ने हो ।
विद्यालयको प्राङ्गणमा बोलीचालीको भाषा अंग्रेजी बनाइनु आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यससँगै आउने नियम पालना नगर्दा भोग्नुपर्ने सजायहरू- अतिरिक्त गृहकार्य, दस्तुर, शारीरिक यातनालगायत हुन्थे । यस्ता सजायले मलाई अंग्रेजी सिक्न कति उत्साहित वा सहयोग गरे, त्यसको लेखाजोखा मसँग छैन । तर, सजाय पाउने डरकै कारण विद्यालयकाे प्रवेशद्वारबाहिरै नेपाली भाषा बिसाएर भित्र छिर्न भने बाध्य बनायो ।
हामीलाई कहिल्यै पनि अंग्रेजी भाषा र विद्यालयमा गरिने अभ्यासका महत्त्वबारे बताइएन । अंग्रेजीलाई बोलीचालीको भाषाका रूपमा स्थापित गर्न सबै रचनात्मक तरिकाहरूभन्दा कडा नियम र सजायद्वारा नै यो काम फत्ते गर्ने निधोमा विद्यालयहरू पुगेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । हुन त अंग्रेजी भाषामा बोल्नुपर्ने विभिन्न प्रतियोगिताहरू हुन्थे । तर, सजायबाट बच्नकै निम्ति अंग्रेजी बोल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ कहिल्यै मेटिएन । कालान्तरमा यसले मेरो अंग्रेजी सिक्ने जाँगरलाई निरुत्साहित गर्दै लग्यो ।
अंग्रेजी पढाइ र बोलीचालीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने मेरा पाठशालाहरूका कति शिक्षक/शिक्षिका आफैँ पनि अंग्रेजीमा पोख्त थिएनन् । यसमा यी शिक्षक/शिक्षिकाको कुनै दोष देख्दिनँ । भाषा त एक सञ्चारको माध्यम न हो, ज्ञानको मापन होइन । शिक्षकहरूसित नजिकिन वा खुलेर कुरा गर्न पनि अंग्रेजी नै बोल्नुपर्ने कारणले रोकेको पो थियो कि, जसले गर्दा शिक्षक-विद्यार्थीबीचकाे सम्बन्ध कक्षामा मात्र सीमित भयो ।
अंग्रेजी पढाइ र बोलीचालीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने मेरा पाठशालाहरूका कति शिक्षक/शिक्षिका आफैँ पनि अंग्रेजीमा पोख्त थिएनन् । यसमा यी शिक्षक/शिक्षिकाको कुनै दोष देख्दिनँ । भाषा त एक सञ्चारको माध्यम न हो, ज्ञानको मापन होइन ।
कक्षा ९-१० सम्म आइपुग्दा सजायको डरले काम गर्न छाडिसकेको थियो । शिक्षक/शिक्षिका छेउछाउ नहुँदा साथीसँग नेपालीमै बातचित गरिन्थ्यो । सायद शिक्षक/शिक्षिकालाई पनि नियम प्रभावकारी नभएको भान हुँदो हो- नेपाली बोलेकै कारण सजाय पाउने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून नहुँदा । तर, अंग्रेजीले चौतर्फी रूपमा घेरिएका हामीमा छर्लङ्ग रूपमा देखिन्थ्यो - नेपाली विषय र भाषाप्रतिको अरुचि ।
बाँकी सबै विषय अंग्रेजीमा पढाइने र अंग्रेजीमै बोल्न लगाइने हुँदा नेपाली भाषा सिक्ने र अभ्यास गर्ने मौका एउटा नेपाली कक्षामा मात्रै मिल्थ्यो । तर, बिडम्बनाको कुरा, सिक्ने जाँगर र उत्साह कमैमा हुन्थ्यो । गुरुले सस्वर पाठ पढ्न लगाउँदा उत्सुकताले उठ्ने हातहरू कमै हुन्थे । बरु धेरैको मनमा गुरुको नजर आफूतिर नजाओस् भन्ने हुन्थ्यो ।
अरु परीक्षाहरूमा खासै चिन्तित नदेखिने साथीहरू पनि नेपाली परीक्षाको दिन आत्तिइरहेको कुरा अनुहारमा छर्लङ्गै देखिन्थ्यो । नेपाली वादविवाद वा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुनेको संख्या कमै हुन्थ्यो । कति साथी त ह्रस्वदीर्घको भुलभुलैयाकै कारण नेपाली भाषा कहिल्यै नपढ्ने/नलेख्ने निधोमा पुगिसकेका थिए ।
नेपाली विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वको जीवनी, कथा, कविता, निबन्ध, अनुच्छेद आदि इत्यादि पढियो । मेरो बुझाइमा यी पाठको उद्देश्य विद्यार्थीलाई नेपाली भाषाकाे दख्खल राख्न सक्ने बनाउनु, भाषाको प्रयोगबारे स्पष्ट बनाउनु र उनीहरूमा यसप्रतिको मोह जगाउनु हो ।
साथसाथै विषयवस्तुलाई गहन रूपमा पढ्न सकोस् र त्यसबाट आफूले सिकेका कुरा र आफ्ना विचारहरूलाई भाषाको माध्यमद्वारा राम्रोसँग उतार्न सकोस् । उदाहरणका निम्ति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको दोषी चश्मा पढेको विद्यार्थीले साहित्यको माध्यमबाट सामाजिक परिस्थितिलाई नियालोस्, देवकोटाको कविता पढेर मनमा उठेका भावहरूलाई कापीमा उतारोस् । तर, वास्तविकता यस्तो थिएन ।
फर्केर हेर्दा नेपाली विषयको पढाइ एक सिर्जनात्मक अभ्यासभन्दा निकै भिन्न थियो । गुरुले हर पाठपश्चात् लेखाइदिने विवेचना र पाठसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न प्रश्नका उत्तरलाई कण्ठस्थ पारी परीक्षामा ओकल्नुमा नै सबै केन्द्रित हुन्थे ।
अझ १० कक्षाको अन्तिम परीक्षामा कस्तो प्रश्नमा कस्तो उत्तरले मात्र बढी नम्बर पाउँछ भन्ने कुराको प्रवचन गुरुले दिन्थे । त्यहाँ कुनै सिर्जनात्मकता र भाषिक दख्खलको मूल्यांकन थिएन, थियो त सिर्फ कसले कति सम्झन सक्छ र ३ घण्टाको समयमा कापीमा उतार्न सक्छ ।
सायद यही रटान र अंकको पछाडि दौडिँदा कतै बाटो बिराएर गलत गन्तव्यमा त पुगिएन ? भाषाका विभिन्न आयामलाई केलाउनुको सट्टा सानो क्षेत्रफलमा मात्र पो सीमित भइयो कि ? १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको पनि लगभग ६ वर्ष भइसकेछ । त्यसबेलाका सहपाठीसँग म बेलाबखत सम्पर्कमा रहन्छु । सहपाठीमध्ये कति यस्ता पनि छन्, जो अझै नेपाली पत्रपत्रिकाका समाचार स्पष्टसँग पढ्न सक्दैनन्, साहित्य र ठूलाठूला किताब त परको कुरा ।
नेपाली लेख्न, पढ्नभन्दा अंग्रेजी नै मन पराउँछन् । कहिलेकाहीँ फेसबुकमा केही नेपाली हरफ/अनुच्छेद पठाएँ भने रोमनाइज्ड नेपालीमा, 'हत्तेरिका नेपालीमा नपठा न' भन्ने साथीहरूको पनि कमी छैन । यिनै साथीहरू हुन्, जसलाई नेपाली भाषाप्रति स्कुले बेलादेखि नै निकै वितृष्णा थियो । अहिले त झन् त्यो वितृष्णा अझ प्रागाढ भइसकेछ ।
हुन त कुन भाषा आफूलाई सजिलो लाग्छ वा कुन भाषाप्रति आफ्नो बढी मोह छ, त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । अंग्रेजी भाषाको प्रभाव नेपालमा बेजोड छ । तर, अंग्रेजी भाषाको प्रभाव सँगसँगै नेपाली भाषाप्रति यत्रो वितृष्णा पैदा हुनुमा कतै हाम्रो विद्यार्थी जीवनको अनुभव त कारक होइन ?
विद्यालयले अवलम्बन गरेको सिकाइको नीतिले उत्साह र कौतुहलताका साथ अंग्रेजी भाषा सिक्न मलाई प्रेरित गरेन । सिर्जनात्मकतामा कम र घोकाइमा बढी जोडका कारण नेपाली भाषाको सिकाइ कत्तिको फलदायी भयो भन्ने कुराको ठ्याक्यै निचोड मसँग छैन । प्रविधिसँग धेरै नजिक अहिलेको पुस्तामा पुरानै शैक्षिक वातावरण र नियमहरू अख्तियार गर्नु फलदायी होला ? सोच्ने बेला आएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७, ११:३३:००